नेपाल जानका लागि सामान प्याक गर्दैहुनुहुन्छ? पख्नुहोस भन्सार सम्बन्धि नया नियम बुझेर मात्र जानुहोला! - khabarbox.com.npkhabarbox.com.np
नेपाल जानका लागि सामान प्याक गर्दैहुनुहुन्छ? पख्नुहोस भन्सार सम्बन्धि नया नियम बुझेर मात्र जानुहोला!
Home » व्यापार » नेपाल जानका लागि सामान प्याक गर्दैहुनुहुन्छ? पख्नुहोस भन्सार सम्बन्धि नया नियम बुझेर मात्र जानुहोला!
Posted On 4:56 am Author siteadmin Category व्यापार.
हरेक पटक बजेट आउँदा विदेशमा रोजगार वा अन्य उद्देश्यले गएकाहरुलाई टिभीसम्बन्धी व्यवस्थाबारे चासो हुन्छ। विदेशमा टिभी एकदम सस्तो देखेपछि किनौँ किनौँ लाग्छ। तर नेपालमा टन्न कर लगाएर महँगो बनाइदिने डर पनि हुन्छ। यसपालिको बजेटले के व्यवस्था गरेको छ त?